‘महिना’ वारी ढिलो हुन्छ ? चाँडो गराउन यी ६ चिज खानुहोस् !
महि’नावारी ढिलो हुने गरेको छ अथवा कुनै कामविशेषले गर्दा निर्धारित मितिभन्दा चाँडै म’हिनावारी होस् भन्ने चाहनुभएको छ भने केहि खानपानमा सुधार गरेमा समस्याको समाधान गर्न् सकिन्छ ।
महि’नावारी चाँडो गराउन यी ६ खानेकुरा खानुहोस्
क्यारोटिनको मात्रा उच्च भएका फलफूल खाने गर्नाले महि’नावारी चाँडो हुन्छ । मेवा, फर्सी, गाजरजस्ता फलफूल र तरकारीमा क्यारोटिन बढी मात्रामा पाइन्छ । क्यारोटिनले शरीरमा एस्ट्रोजेन हा-र्मोनको मात्रा बढाइदिन्छ, जसकारण महिनावारी चाँडै हुन्छ ।
रातो मासु बढी खाने गर्नाले शरीरमा बढी ताप उत्पन्न हुन्छ र म’हिनावारी निर्धारित मितिभन्दा चाँडै हुन जान्छ ।
सक्खर खानाले पनि महि’नावारी चाँडै हुने गरेको विभिन्न अनुसन्धानले पुष्टि गरिसकेका छन् ।
दिनमा तीन ग्लास अनारको जुस खाने गर्नाले महि’नावारी चक्र चाँडै सुरु हुन्छ ।
भुइँकटहरले शरीरमा ताप उत्पन्न गराउँछ । बढी मात्रामा भुइँकटहर खाने गर्नाले पनि चाँडै हुन्छ ।
उम्लँदै गरेको पानीमा एक चिम्टी बेसार हालेर बिहान र राति पिउने । महिना’वारी हुनुभन्दा १५ दिनअघिदेखि लगातार यसो गर्दा पाँच दिनअघि महि’नावारी भएका उदाहरण प्रशस्तै भेटिएका छन् ।
२०७८ श्रावण १०, आईतवार प्रकाशित 1 Minute 277 Views